Fanadinana polisim-pirenena Ampahafolon’ireo mpiadina no horaisina
1 150 amin’ireo mpiadina 14 700 no raisina eo anivon’ny polisim-pirenena. Notanterahina ny sabotsy
18 janoary teo ny fanadinana hifaninana ho mpianatra eo amin’ny polisim-pirenena. Nahatratra 14 700 ireo mpifaninana tamin’izany avy amin’ny lafivalon’ny Nosy. Omaly alahady no nifarana ity
fanadinana ity izay eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka. 1 000 no horaisina polisy, 100 inspektera, 30 ofisie, ary 20 kaomisera. Niezaka nampahafantatra izany tahaka ireo fampianarana ambaratonga ambony tamin’ireo hetsika na “salon des étudiants” hatrany ny tompon’andraikitry ny fifandraisana sy ny sekoly teo anivon’ny polisim-pirenena. Hita taratra izany tamin’ny hetsika teny amin’ny Anjerimanontolo Ankatso sy tamin’ireo nokarakarain’ny tsy miankina tahaka ireo tao amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Voalaza moa fa entina ifantenana ireo izay manam-paniriana tanteraka no nampalalana tamin’ireny hetsika fanazavana sy fizarana “prospectus” ireny. Niarahana tamin’ny Bianco ny fifaninanana. Voalaza hatrany fa ady goavana eo anivon’ity polisim-pirenena ity ny kolikoly. Heverina fa handio tanteraka ny jiolahy ao anatin’ny polisim-pirenena ihany koa ny fijerena akaiky ireo efa am-perinasa sy mpiadina, tahaka ny any ivelany izay ilana psikôlôgy mihitsy fa mety miova mantsy ny olona. Rehefa tsy misy kolikoly eo am-pandraisana mpianatra ho polisy dia hihena ny risoriso. Voalaza mantsy fa manenjika ny ekôlazy laniny tamin’ny fifaninanana ho mpitandro filaminana no nampahazo vahana ny kolikoly sy ny “otra” hatrizay.